News - Gemological Institute of muCambodia
Zvishongo zvekushongedza zvekutengesa kuSabara Angkor Resort & Spa
Hurukuro naVinnamese National TV
Hurukuro naFrench TV
Interview by French TV I was interviewed by M6 French TV channel XCHARXENQUETE EXCLUSIVEXCHARX, about Cambodia gemstones.
De Beers kutengesa maitiro emadhimoni sematombo emabwe
De Beers boka rakazivisa kutanga kwekambani itsva inonzi Lightbox Jewelry iyo inotanga kutengesa rudzi rutsva rwezvigadzirwa zvemadhini pasi peShoko re Lightbox munaSeptember 2018, inopa vashandi zvakakwirira, mafashoni ekugadzirwa kwezvishandiso pamatengo akaderera kupfuura zvigadzirwa zvemadamondi zviripo. Lightbox synthetic diamond inoshambadzira ...
Kubva kutanga kwaMay 2018, gomo reKuuea riri kuHawaii rave richibuda. Kutanga gore rekare rakaparadzana nemvura yakakura, mhepo inopisa uye mhepo yakabva kuPu'u 'O'o crater pamusangano, magma akabva atamira kune dzimwe nyika, achizarura mutsara wezvipfeko kubva zvino iye zvino ...
Kana iwe uchibatanidza peji ino, inogona kunge yakanyanyisa. Usati watenga mabwe anokosha kana zvishongo muB Siem Reap, zvakakosha kuverenga mashoko ari pasi apa. Siem Reap ndeimwe yenzvimbo dziri munyika umo kune mazita ematombo anokosha. Sezvimwe nzvimbo dzinoshanyira nzvimbo, zvinenge zvose zviri ...